Nezvedu - XIAMEN GACHN TECHNOLOGY CO., LTD.
Gachn Technology (Godhi Code: 832368)inotarisa munzvimbo yehungwaru zvigadzirwa zvekugadzira uye inoshingairira kugadzira marongero-yakagadzirwa kurongedza chokwadi kune vatengi vedu. Cachi
Gachn Technology inopindura zvine simba ku "Pfungwa muChina 2025" nzira yenyika, ine chinangwa chehungwaru hwenyika yekugadzira michina maitiro uye inoisa zvese kudiwa uye kushandurwa mukushandura "fekitari isina kuvharwa" kuti ive yechokwadi kune vatengi vedu.
Panguva ino nenguva, pasi peiyo brand yeGACHN ®, isu tine mishini yekuverenga yekuverenga-yekumesa nekuisa macheki ekutendeuka ekugadzirisa zvigadzirwa senge sanitary napkin, baby diaper uye yakaoma & wet wipes uye nezvimwe zvakadaro. Pamusoro peizvozvo, isu tiri kuronga kuwedzera chikafu chekuisa uye zvigadzirwa zvinongedza kune yedu chigadzirwa portfolio.
Gachn Technology yakavambwa muna 2011. PaGachn, isu tinonamira ku "vatariri-vakatungamira" bhizinesi uzivi nguva dzese. Mwaka wega wega anodarika gumi muzana wemari yegore rino inoenda kuR & D Investment. PaGachn, tinoisa mweya yedu yose nepfungwa kuti tiwane kukosha kune vatengi. By dong kudaro, GACHN ® mhando zvigadzirwa uye masevhisi anozivikanwa zvakanyanya mumusika. Mukudzoka, kambani yakawanawo mukana unoshamisa wekukura nemukurumbira wegore negore kupfuura 50%. Sezvo ikozvino, iyo kambani ine yegore negore yekugadzira inogadzira simba inodarika mazana maviri emaseti. Kwemakore, Gachn yakazvigadzirira pachayo mumuchina unodiwa wekurongedza nemidziyo yemabhizimusi epamba epamba ekugadzira.
Bumbiro remutemo: Mutengi anotarisa
Basa: Kugadzira zvigadzirwa zvakangwara zvinehungwaru uye kugadzira valus yevatengi.
Chiono chedu: Kuve nhamba yekutanga mhasuru pasi rese.
Tsika dzakanaka: Ruramisiro, Rova, Yakakwana, Wina-kuhwina
Kusasarura: kukwikwidza kwakaringana, tsvaga chokwadi kubva pazvinhu
Kurumidza: Kuti uve muenzaniso, vadikani kutora basa, chanllange mitemo
Yakakwana: kuenderera mberi kugadzirisa, ita kuti kukwana kuve kwakakwana, usamborega kufambira mberi
Wina-win: kuhwina-kuhwina pamwe nevatengi, kuhwina-kuhwina nevashandi, kuhwina-kuhwina nevatengesi.
Gachn Technology's knockout chigadzirwa uye marongetsi mhinduro:
1、otomatiki kuverenga-stacking muchina uye kurongedza mhinduro kune utsanana napkins uye panty liners
2 、 otomatiki kuverenga-stacking muchina uye kurongedza mhinduro mwana dhayiri
3 、 Yakakwira nekumhanyisa yakanyorova kupukuta yega uye yakawanda-zvidimbu zvigadzirwa kugadzira mutsara, kuverenga-kurongedza muchina
4 、 Yakatsetseka dhizaini-rekuchena kumeso kumeso kwemuchina wekurongedzera uye maviri maviri, chikwama cheturu kurongedza muchina
5 、 Kukwirira-kumhanya, kuverenga-kurongedza mutsetse wekugadzira mutsetse wekutakurika chimbuzi
6 、 Yakakurumidza kumhanyisa kugadzirwa uye yekurongedza mutsara wemasiki echiso, yakakwira kukurumidza kumeso kwechiso mask uye yekuisa chisimbiso
Kuenderera nenhanho yemusika, tinogara tichivandudza isu pachedu uye kutiita vakakwana.
Isu tinogamuchira neushamwari shamwari dzedu pasi rese kuti dzitibate isu kwenguva yakareba bhizinesi rekubatana. Kutarisira nemwoyo wose kusungula win-win mushandirapamwe mushandirapamwe newe munguva pfupi iri kutevera!